Fianarana nianatra lavitra – Mason City sekoly COVID-19 foibe
Ny MCS anay
Fianarana nianatra lavitra
Ny tanjonay ho an'ny traikefa fianarana lavitra an'i Mason (RLE) dia ny manome kalitao avo lenta, traikefa nahafahana mianatra ho an'ny mpianatsika izay azo tanterahina ihany koa ho an'ireo fianakaviana izay mety hiatrika adidy maro mandritra ity fotoana tsy mbola nisy toa azy ity.
Rehefa mamolavola ny RLE-tsika, ny ekipan'ny Experience Experience dia nitaona loharano sy hevi-baovao avy amin'ny manam-pahaizana isan-karazany, sady mianatra avy amin'ny zavatra niainan'ireo distrika tany amin'ny fanjakana hafa izay nanomboka nianatra lavitra teo alohanay. Ny fomba fiatrehantsika ny RLE dia mifototra amin'ny fifandraisana matanjaka izay natsangana nandritra ny taona teo amin'ireo mpampianatra sy mpianatra. Niezaka ny niantehitra tamin'ny teknolojia efa mahazatra ny mpianatra izahay; na izany aza, Mety mitaky fitaovana vaovao ny RLE ary hanao izay ho afany ny mpampianatra antsika amin'ny fanolorana fanampiana ho an'ny mpianatra.
Ity ambany ity, ampidirintsika ao ny valiny amin'ireo fanontaniana antenainay fa mety hananan'ny fianakaviana momba ny fianarana lavitra. Feno fankasitrahana izahay ho an'ireo mpianatra sy fianakaviana mahatalanjona eo am-panombohana ity dia vaovao ity!
Ahoana no fomba hahazoan'ny mpianatro anjara asa fianarana lavitra?
Ho an'ny mpianatra kilasy PK-4:
Handray mailaka ianao amin'ny 8 ora alina isaky ny hariva amin'ny antsipiriany momba ny fianarana amin'ny andro manaraka ary ao anatin'izany ny rohy na loharanon-kevitra mifandraika amin'izany. Nomena safidy ny mpampianatra hijerena mialoha ny hetsika fianarana rehetra mandritra ny herinandro amin'ny alatsinainy, na fizarana hetsika fanabeazana isan'andro. Na inona na inona fomba nofidin'ny mpampianatra, hahazo mailaka isan'andro ianao amin'ny 8 ora alina.
Ho an'ireo mpianatra amin'ny naoty 5-12:
Ny hetsi-pianarana lavitra dia hapetraka ao amin'ny pejin'ny fampianarana Schoology. Ny drafitra fianarana isan-kerinandro dia halefa amin'ny 8 ora alina isaky ny alahady mba hahafahan'ny mpianatra sy ny fianakaviana mikasa amin'ny herinandro ho avy. Hiditra amin'ny drafitra ianarana ny mpianatra isaky ny fampianarana nosoratana anarana. Ny drafi-pianarana dia ho ao anaty fampirimana iray eo an-tampon'ny pejin'ireo fitaovana ho an'ny taranja rehetra.
Fandraisana an-tsoratra Schoology Parent
Torolàlana momba ny fidirana amin'ny Schoology amin'ny maha-ray aman-dreny
Manana olana amin'ny fidirana amin'ny Schoology aho – mailaka [email protected]
Inona avy ireo karazana hetsika ianarako izay antenaiko amin'ny kilasy PK-6?
Ny mpampianatra dia hampiditra ny fianarana amin'ny sehatra atiny rehetra. Ny drafi-pianarana dia ahitana fampifangaroana fampidirana atiny vaovao sy famelana fotoana ho an'ny mpianatra hampihatra sy hanamafy izay natolotra.
Mpampianatra faritra manokana (toy ny gym, mozika, ary ny kanto) dia samy hizara lesona iray isan-kerinandro mba hidiran'ny mpianatra.
Inona avy ireo karazana hetsika fianarana tokony antenaiko amin'ny naoty 7-12?
Hiova ve ny fomba fanao amin'ny grady mba hanehoana ireo toe-javatra miavaka sy toe-javatra iainan'ny mpianatra mandritra io fotoana io?
MCS dia manolo-tena hiaina ny Torolàlana momba ny kolontsaintsika amin'ity indray mitoraka ity ary haneho taratry ny fomba Comet Cares amin'ny fampianarana sy ny fianarana, anisan'izany ny fanaovantsika naoty. Ny fomba Comet Cares dia ahafahantsika mangoraka, manaiky, ary mitovy amin'ny toe-javatra sy toe-javatra mampiavaka ny mpianatsika sy ny fianakavianay. Ny mpianatra sy ny fianakaviany dia manana traikefa marobe mandritra io krizy manerantany io. Ny fahafantarana ny fanamby mety atrehin'izy ireo, ary tsy voafehiny izy ireo, ny politikam-pitsarana eto amintsika dia tsy tokony hanisy ratsy zaza. Mandritra ity fotoam-pianarana lavitra ity, ny ifantohanay dia voalohany indrindra amin'ny fianaran'ny mpianatra ary miantoka ny fahasalaman'ny mpianatsika. Ny rohy eto ambany dia manolotra antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fanazarana naoty mandritra ny fianarana lavitra.
Hamantatra bebe kokoa ->
Mandra-pahoviana no andrasana ny mpianatro handany ny fifantohany amin'ny hetsika fanabeazana isan'andro?
Raha hitanao fa be loatra ny mpianatrao ary ela loatra ny hetsika ianaranao na vonona ny hanao zavatra ampianariny maharitra ny mpianatrao, mba manatona ny mpampianatra anao azafady.
Takiana ve ireo mpianatra hiantso an-tsary mivantana miaraka amin'ny mpampianatra azy ireo na amin'ny mpianany hafa?
Afaka manolotra fotoana hifandraisana amin'ny alàlan'ny antso an-tsary mivantana ireo mpampianatra (ohatra, ny alalan ' Google Meet) fa tsy hotakina izy ireo. Azon'ny mpampianatra atao koa ny mampiasa teknolojia miorina amin'ny horonantsary tsy mifanaraka, toy ny FlipGrid ary SeeSaw, hifandraisana amin'ireo mpianatra.
Ao amin'ny MMS sy MHS, hanaraka fandaharam-potoana ny mpampianatra rehefa manolotra fotoana mety izy ireo, antsoina hoe Comet Connect Time, hifandray amin'ny alàlan'ny antso an-tsary mivantana hanalavirana ireo mpianatra manana fotoana fivoriana mifanindry.
Students and parents are, mazava ho azy, also welcome to contact their teacher(S) anytime for help. Teachers will reply within 24 hours to all questions.
Reading teachers will share weekly work via email (K-4) or in Schoology (5-6). Ankoatry ny, reading teachers will connect individually with families to provide additional reading practice and support.
Gifted Specialists will share activities with the students they typically interact with to provide enrichment and extension options. In grades 1-4, Gifted Specialists will email initial information on how to access gifted work. In grades 5 ary 6, Gifted Specialists will post learning activities in Schoology.
Intervention and related services staff are contacting individual families via phone and virtual meetings to discuss services and to develop Remote Learning Plans that support both core and specially designed instruction. Based on each student’s Learning Plan, Ireo manampahaizana manokana momba ny fidirana an-tsehatra sy ireo mpiasa mifandraika amin'izany dia handefa izany na mailaka asa fanelanelanana isan-kerinandro. Ankoatry ny, mpikambana ao amin'ny ekipa (manam-pahaizana manokana, mpiasa sy serivisy mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'izany) dia handahatra fotoana hifaneraserana amin'ny mpianatra lavitra.
Ahoana no ahafahako manohana ny mpianatro?
Ny fanohanana ny mpianatrao dia mety manana endrika maro isan-karazany, miankina amin'ny filan'izy ireo. Ny zavatra nianarantsika avy amin'ny distrika am-pianarana tany amin'ny fanjakana izay nanangana fianarana lavitra alohan'ny Ohio dia afaka maharitra tapa-bolana vao miroso amin'ny fomba fanabeazana vaovao. Omeo fotoana ny tenanao sy ny zanakao handamina, ny fahafantarana fa ny ekipan'ny mpampianatra anay dia eto hanohana anao rehefa miara-mamantatra izany izahay.
Fanampin'izany, paikady vitsivitsy mety tianao ho dinihina:
Amporisiho ny mpianatrao hiala sasatra mandritra ny fotoana ianarany, fa tsy manandrana mamita ny zava-drehetra ao anaty sakana iray
Zahao hoe www.GoNoodle.com ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany (horonan-tsary fohy isan-karazany hampitony sy hanome hery)
Afaka miditra amin'ny loharano an-tserasera ireo mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa sy ambaratonga faharoa Eto izay misy fofonaina miaina lalina sy fanatanjahan-tena, fampihetseham-po amin'ny saina sy fisaintsainana, ary fampihetseham-batana hozatra miadana.
Mihainoa mozika miala sasatra
Midira MCS Mindful Music ao amin'ny: citysilence.org/learn, Password: mindfulmason
Jereo ireo hetsika fanabeazana ataon'ny mpianatrao mandritra ny andro na herinandro ary miara-miasa hamorona fandaharam-potoana isan'andro sy tanjon'ny tsirairay
Ankalazao ny zava-bitan'ny mpianatrao, lehibe sy kely
Manaova fizahana isan'andro miaraka amin'ny mpianatrao momba izay mandeha tsara sy amin'ny toerana mety ilana fanampiana
Iza no tokony hifandraisako raha manana fanontaniana na ahiahy amin'ny ankapobeny aho?
Azafady, atombohy amin'ny mpampianatra ny mpianatrao. Raha manana fanontaniana izay tsy hain'ny mpampianatra ny mpianatra hamaly ianao na mitady fanampiana bebe kokoa ianao, Ho hita eo koa ireo mpitantana trano hanohana anao.
Iza no tokony hifandraisako raha manana olana ara-teknolojia aho?
Email [email protected] ary ny ekipa teknolojia an'i Mason dia hanampy anao.